Iqabane lakho le-OEM / i-ODM elithembekileyo-Umenzi wokuKhanya kwe-LED
Ukukhanya kwezibane zangaphakathi
Ukukhanya kweBay High Bay
Ukukhanya kweVapor Tight
Ukukhanya koBungqina boBu-Tri
UkuKhanya kwePaneli ekhokelwayo
Ukukhanya koMkhukula weLed
UkuKhanya okuKhanyayo okuKhokelwayo
Ukukhanya kwe-Strip Lighting
Iqabane lakho le-OEM / ODM elinokuthenjwa lokuKhanyisa kwe-LED
Ukukhanya kokukhanya kwe-LED kubonelela ngenkonzo ye-OEM / ODM
Injongo yethu kukwanelisa abathengi bethu ngokuchaneka okuphezulu kunye nomgangatho onokuthenjwa ukuqinisekisa ukuba wonke umthengi unokuziva ekhululekile kwaye ezithembile ngezinto zethu kwizicelo zazo.
Ukukhanya koMkhukula (B Series Light Light)
Ukukhanya koMkhukula we-LED Uthotho olutsha lokukhanya kwezikhukula lwe-LEDIA ludibanisa ukonga amandla, ulawulo oluphambili lwe-optical, kunye ne-aesthetics ye-slim yeprofayili yanamhlanje yokuhambisa ukusebenza okuphuculweyo kwizicelo zokukhanyisa izikhukula. Izindlu ezirhabaxa zokusweleka zibonelela ngolawulo olushushu lwangaphambili lobomi obude kunye negumbi elinokungqina kwemozulu ukumelana nemingeni, iimeko zangaphandle. Umsebenzi ophambili Housing Zomelele, zife-cast aluminium izindlu. Iilensi zeglasi ezinobushushu ziyamelana nomothuko kunye nefuthe. Proof Rust kunye umhlwa ubungqina, izinto olungumgubo eziphathekayo. LED Ii-LED zebakala eziphezulu zeBrand, iziphumo eziphezulu, ubomi obude. Light ukukhanya okuphezulu kugqame kunye neglasi enobushushu eyi-4mm ubukhulu. Sensor Ukhetho lwenzwa yokukhanya kwemini. ◆ Ibronze kunye nemibala eyenziwe yangumgubo yokugquma ukugqitywa
Ukukhanya koMkhukula weSitalato
AC100-27V / AC220-240V; Intaba yesibiyeli / iNtaba yeWall / iNtaba yePole, isivamvo sasemini, i-IP65, iGrey / uMnyama oMnyama, iwaranti yonyaka emi-5, 4000K / 5000K / 6000K.
Ngokwenene IP68 Led Strips
Umtya wenyani we-IP68 we-LED, olungele ukusetyenziswa kwangaphandle, olungele ukusetyenziswa kwamanzi. Umtya oguquguqukayo we-IP68 / ukukhanya kwe-IP68 / ukukhanya kweentambo ze-IP68 / ukuntywila okungaphantsi kwamanzi / iteyiphu engaphantsi kwamanzi / umtya oguqukayo wokuntywila echibini / ukukhanya kweTape kwesandi sokuguqula Ukulungele ukuguqula iphuli, ukukhanya kwangaphandle, ukukhanya kokuhombisa ngaphandle njl.
I-COB Flex Strip-Isibane se-LEDIA
1. Uthotho lwe-COB Flex, usapho oluguquguqukayo lwe-COB olufumanekayo ngombala omnye, ukulungiswa okumhlophe, i-RGB kunye ne-digital RGB. 2. Umbala omhlophe we-COB Flex, Iyafumaneka nge-DC12 / 24V, iMin. ububanzi 3mm. 3.Umbala omnye we-COB Flex, efumaneka kuBomvu, Luhlaza, Luhlaza, Mthubi, Amber njl. Umtya we-COB flex strip, ukukhanya okungahambelaniyo kwichaphaza, ukusebenza kokukhanya okugqibeleleyo, iCRI ephezulu. Umtya oguqulweyo we-COB / ukukhanya kwetape ye-COB / umjelo osimahla we-COB strip / ukukhanya kwe-COB kwetheyiphu Ukulungele ukukhanya kwekhava
Ukukhokela iinkampani zokukhanyisa kwilizwe jikelele
Ukusukela ekusekweni kwayo, i-LEDIA ibigxile ekunikezeleni ngeenkonzo ze-OEM / ODM kunye nokuphuhlisa iimveliso ezahlukeneyo ezenzelwe amaqabane ethu.
1. Uphando: Abathengi baxela into oyifunayo, iinkcukacha zomsebenzi, umjikelo wobomi kunye neemfuno zokuthobela.
2. Uyilo: Iqela loyilo liyabandakanyeka kwasekuqaleni kweprojekthi yokuqinisekisa ezona mveliso zilungeleleneyo ngokwesiko ukulungiselela iimfuno zabathengi ..
3. Ulawulo loMgangatho: Ukulungiselela ukubonelela ngezakhiwo ezisemgangathweni ophezulu, sigcina ukusebenza ngokufanelekileyo
& Inkqubo yoLawulo loMgangatho efanelekileyo.
4. Ukuveliswa kweMisa: Nje ukuba iiprototypes ziqinisekisiwe zoyilo ngokwendlela, umsebenzi, kunye nemfuno, imveliso linyathelo elilandelayo.
5. Singazilungiselela ukuthutha ii-odolo- nokuba zenziwe ziinkonzo zethu zangaphakathi, abanye abathengisi okanye indibanisela yazo zombini.
Isibane sokuqikelela sangaphandle
Isibane somgca wangaphakathi
Isibane esitratweni sangaphandle
Yasekwa ngonyaka ka-2004, Guangzhou LEDIA Izibane Co., Ltd ishishini eliphezulu-zobugcisa zikarhulumente ibekwe e Guangzhou, China, inkampani phantsi HongliZhihui Group (Top 2 LED package umenzi e China). Ngaphezulu kwe-30 iinjineli ezinamava kunye nelebhu yovavanyo ye-CNAS, inkqubo yolawulo ye-ISO 9001/14001, i-LEDIA ibibonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kumaqabane ethu ahlonitshwayo kwihlabathi liphela, kubandakanya ukukhanya kwangaphandle kwe-LED, ukukhanya kwezibane ze-LED, ukukhanya kwezibane zorhwebo kunye nezibane ze-LED Zonke ziyi-DLC / UL / ETL / TUV / SAA / CE / ENEC efanelekileyo.
Ukusukela ekusekweni kwayo, i-LEDIA ibigxile ekunikezeleni ngeenkonzo ze-OEM / ODM kunye nokuphuhlisa iimveliso ezenziwe ngohlobo oluthile kumaqabane ethu. Ngexesha lokukhula kwethu ngokukhawuleza, i-LEDIA iyavuya ukubona amaqabane ethu esiya esiba makhulu kwaye esomelela kwintengiso yabo kwaye anqwenela ukuqhubeka nobudlelwane bethu obuqinileyo kule minyaka izayo!